musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Verenga Pasi PaNASA SpaceX Crew-3 Lift Off
Ndege yeCrew-3 ichatakura vanoona nezveNASA Raja Chari, mutungamiri wemauto; Tom Marshburn, mutyairi wendege; naKayla Barron, nyanzvi yemamishinari; pamwe neESA (European Space Agency) astronaut Matthias Maurer, uyo achashanda semudzidzisi wezvemishinari, kunzvimbo yemuchadenga kwemwedzi mitanhatu yesainzi mishoni.
NASA ichapa kufukidza kwekuuya kwekutanga nekutangisa zviitiko zveiyo agency SpaceX Crew-3 agency nevemuchadenga kuInternational Space Station. Iyi ndiyo yechitatu yekutenderera kwevashandi pamwe nevasayera muchadenga veSpaceX Crew Dragon uye yechina kubhururuka nevemuchadenga, kusanganisira iyo Demo-2 bvunzo kutiza, sechikamu cheCommunity Crew Chirongwa.
Kuvhurwa kwacho kwakanangana na2:21 am EDT Svondo, Gumiguru 31, paSpaceX Falcon 9 roketi kubva kuLaunch Complex 39A paNASA's Kennedy Space Center muFlorida. The Crew Dragon Endurance yakarongerwa kumira pachiteshi chemuchadenga na12:10 am Muvhuro, Mbudzi 1. Zviitwa zvekutanga, kutanga, uye kumisa nzvimbo zvicharatidzwa paNASA Terevhizheni, purogiramu yeNASA, uye webhusaiti yesangano.
Nguva yakatarwa yapfuura yekubvumidzwa kwenhepfenyuro ye-mu-munhu kufukidza kwekuvhurwa uku. Rumwe ruzivo nezve kubvumidzwa kwemidhiya kunowanikwa nekutumira tsamba paemail: [email inodzivirirwa]
Vese vezvenhau vanotora chikamu mumisangano yenhau inotevera ichave iri kure kunze kwekunge zvakanyorwa zvakanyorwa pazasi, uye inoverengeka chete nhepfenyuro ichagara paKennedy nekuda kwechirwere checoronavirus (COVID-19). Ndokumbira utarise kuti zvivakwa zveKennedy Press Saiti zvicharamba zvakavharwa muzviitiko izvi zvekuchengetedza vashandi veKennedy nevatori venhau, kunze kwenhamba shoma yemidhiya iyo ichagamuchira kusimbiswa mukunyora mumazuva anotevera.
NASA's SpaceX Crew-3 mishoni kufukidza ndeinotevera (nguva dzese dzekuMabvazuva):
Muvhuro, Oct. 25
7 pm (inenge) - Flight Readiness Review (FRR) Media Teleconference kuKennedy (pasati papfuura awa rimwe mushure mekupedzwa kweFRR) nevateveri vanotevera:
Kathryn Lueders, mubatsiri maneja, Space Operations Mission Directorate, NASA Headquarter
Steve Stich, maneja, NASA Commercial Crew Chirongwa, Kennedy
• Joel Montalbano, maneja, International Space Station, Johnson Space Center yeNASA
• Holly Ridings, director director, Flight Operations Directorate, Johnson
• William Gerstenmaier, mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Kuvaka uye Kuvimbika kweNdege, SpaceX
• Frank de Winne, maneja wechirongwa, International Space Station, ESA
• Junichi Sakai, maneja, International Space Station, JAXA
Midhiya inogona kubvunza mibvunzo kuburikidza nefoni chete. Nezve iyo dial-in nhamba uye passcode, ndapota nyorera Kennedy newsroom pasati papfuura 4 pm Muvhuro, Gumiguru 25, pa: [email inodzivirirwa]
Chipiri, Gumiguru 26
1:30 pm (anenge) - Crew Arrival Media Chiitiko kuKennedy nevateveri vanotevera (vashoma, vakambosimbiswa mu-munhu midhiya chete):
• Bob Cabana, NASA mubatsiri maneja
• Janet Petro, director, weKennedy Space Center yeNASA
• Astronaut weNASA Raja Chari
• Nyanzvi yemuchadenga yeNASA Tom Marshburn
Hapana terevhizheni sarudzo inowanikwa yechiitiko ichi.
Chitatu, Oct. 27
7:45 am - Virtual Crew Media Engagement kuKennedy neCrew-3 vazivi venyeredzi:
China, Gumiguru 28
1 pm - Science Media Teleconference yekukurukura nezvekuferefetwa kwevashandi veCrew-3 panguva yebasa ravo nevateveri vanotevera:
• David Brady, musayendisiti wechirongwa cheInternational Space Station Chirongwa paJohnson, achapa sumo kutsvagiridzo nehunyanzvi mukati meCrew Dragon spacecraft.
• Dr. Yun-Xing Wang, muongorori mukuru muStructural Biophysics Laboratory kuNational Cancer Institute, naDr.Jason R. Stagno, musayendisiti wevashandi muStructural Biophysics Laboratory kuNational Cancer Institute. Wang naStagno vachataura nezveyunifomu Protein Crystal Growth kuyedza iyo inovavarira kukura padhuze nema microcrystals akakwana mu microgravity, inozo ongororwa nekukurumidza nemufananidzo une simba weatomu pavanodzoka ku Nyika pamwe neveCrew-2 vanoongorora muchadenga.
• Dr Grace Douglas, mutungamiri wezvesainzi weNASA's Advanced Food Technology yekutsvagisa basa, uyo achakurukura nezveFood Physiology kuyedza. Uku kutsvagurudza kunoongorora kukonzeresa kwekuwedzera kwechikafu chemuchadenga pane hutano hweastronut.
• Dr. Hector Guiterrez, purofesa we mechanical and aerospace engineering kuFlorida Institute of Technology, uyo achakurukura nezve Smartphone Vhidhiyo Guidance Sensor (SVGS) iyo ichaedza seti yemabhatani eUSD ayo maAstrobee emahara-anobhururuka marobhoti achabatana panguva yekuumbwa kufamba kwendege.
• Mumiriri kubva kuStandard Measure kuferefeta, iyo inounganidza seti yezviyero zvepakati zvine chekuita nenjodzi dzevanhu dzendege kubva kune vanoongorora nguva, nguva, uye mushure menguva refu.
NeChishanu, Oct. 29
12 pm - NASA Administrator Media Briefing paNASA TV nevateveri vanotevera:
• Bill Nelson, maneja weNASA
• Pam Melroy, mutevedzeri wemukuru weNASA
• Woody Hoburg, muchadenga weNASA
10 pm - Paridza Nhau Yemusangano kuKennedy (pasati papfuura awa rimwe mushure mekupedzwa kweRaunch Kugadzirira Ongororo) nevateveri vanotevera:
Steve Stich, maneja, Commercial Crew Chirongwa, Kennedy
• Joel Montalbano, maneja, International Space Station, Johnson
• Jennifer Buchli, mutevedzeri wemusayendisiti, International Space Station Chirongwa, Johnson
• William Ulrich, anovhura wezvemamiriro ekunze, 45th Weather Squadron, United States Space Force
Mugovera, Gumiguru 30
10 pm - NASA Terevhizheni kuvhura kufukidza kunotanga. NASA Terevhizheni ichave ichienderera ichivhara, kusanganisira kuvhurwa, kumisikidzwa, kuvhurwa, uye kugamuchirwa mhemberero.
Svondo, Gumiguru 31
2:21 am - Kutanga
NASA TV kufukidza kunoenderera kuburikidza nekumisikidza, kusvika, uye mutambo wekugamuchira. Panzvimbo yemusangano wenhau wekumisikidza, hutungamiriri hweNASA huchapa zvirevo panguva yekutepfenyura.
Muvhuro, Nov. 1
12:10 am - Kumira
1:50 am - Kuvhura Hatch
2:20 am - Mhemberero yekugamuchira
NASA TV Kutanga Kuburitsa
NASA TV mhenyu kufukidza ichatanga na10 pm Mugovera, Gumiguru 30. YeNASA TV downlink ruzivo, mashedhiyo, uye zvinongedzo kune inoyerera vhidhiyo.
Mutinhimira chete wemisangano yenhau uye kuvhurwa kwenyaya ichaendeswa kumatunhu eNASA "V", anogona kuwanikwa nekufona 321-867-1220, -1240, -1260 kana -7135. Pazuva rekuburitsa, "mission odhiyo," zviitiko zvekuverengera zvisina NASA TV kuvhurwa komendi, ichaendeswa pane 321-867-7135.
NASA Webhusaiti Yekutanga Inovhara
Kutanga zuva kufukidzwa kweNASA's SpaceX Crew-3 mishoni ichave iripo pane webhusaiti webhusaiti. Kuvhara kunosanganisira kutepfenyura kwepamoyo uye mablog ekuvandudzwa kutanga kwete pamberi pegumi pa10 pm ET nemugovera, Gumiguru 30, sezvo zviitiko zvekuverenga zvinoitika. Pa-kudiwa kutenderera vhidhiyo uye mafoto eiyo yekutanga ichave ichiwanikwa munguva pfupi mushure mekusimudzwa.
Enda kuKuburitsa Chaizvoizvo
Nhengo dzeveruzhinji dzinogona kunyoresa kuti dzipinde muchirongwa ichi zvirinani kana kujoina chiitiko cheFacebook. Chirongwa cheNASA chaicho chevaenzi cheichi chinangwa zvakare chinosanganisira zvakagadziriswa zvekuvhura zviwanikwa, zviziviso nezve mikana yakabatana, pamwe nesitampu yeiyo NASA chaiyo muenzi pasipoti (yeavo vakanyoreswa kuburikidza neChitbrbrite) zvichitevera kuburitswa kwakabudirira.
NASA ichapa mhenyu vhidhiyo feed yeLaunch Complex 39A maawa makumi mana nemasere pasati pasimudzwa kuronga kweCrew-48 mishoni. Kumirira isingafungidzike nyaya dzehunyanzvi, iyo feed ichave isina kumiswa kusvikira kutanga kwekuparadzira kwatanga paNASA TV, angangoita maawa mana isati yatanga.
NASA's Commerce Crew Chirongwa yakaendesa pachinangwa chayo chekuchengeteka, kuvimbika, uye kudhura-kutakura kwekufambisa kuenda nekubva kuInternational Space Station kubva kuUnited States kuburikidza nekubatana neindasitiri yakazvimirira yeAmerica. Uku kudyidzana kuri kushandura arc yenhoroondo yemuchadenga yemuchadenga nekuvhura kupinda kune yakaderera-Pasi orbit uye iyo International Space Station kune vanhu vazhinji, sainzi yakawanda, uye mikana yakawanda yekutengesa. Chiteshi chemuchadenga chinoramba chiri chitubu cheNASA inotevera kusvetuka mukuongorora nzvimbo, kusanganisira mamishinari emangwana kuMwedzi uye, pakupedzisira, kuMars.